कतै तपाईं पनि अपानवायु रोकेर त राख्नुहुन्न ? हुन्छ यसको नकारात्मक असर !
काठमाडौं — अपानवायु अर्थात् पाद एक सामान्य र प्राकृतिक प्रक्रिया हो तर धेरै मानिस यसबाट लजाउँछन् । यो मजाकको विषय होइन किनकि एक व्यक्तिले दिनदिनै आधा लिटर ग्यास पादमार्फत निकाल्छ ।
मानिसहरूको माझमा अपानवायु छोड्दा लाज हुन्छ भनेर रोक्ने गर्नुभएको छ भने यसको परिणाम निकै घातक हुन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार, पाद रोक्दा वायु शरीरमा फेरि घुम्न थाल्छ र अर्को ठाउँबाट निस्कन्छ । त्यसले शरीरमा खराब असर पार्छ ।
पादले शरीरका खराब वायुलाई बाहिर निकालिदिन्छ । हामीले खाना खाएपछि त्यसलाई पचाउन ग्यास निस्कन्छ अनि त्यही पादका रूपमा निस्कन्छ ।
पादको बेला आउने आवाज ग्यासको मात्रा, त्यसको तीव्रता र शरीरको अवस्थामा निर्भर रहन्छ ।
हामीले खाने खानामा सल्फर तत्त्व हुनाले पादबाट दुर्गन्ध आउँछ । पाचन प्रक्रियामा यो सल्फरबाट हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास बन्छ र त्यो दुर्गन्धित हुन्छ । तर तपाईंको अपानवायु एकदमै गनाउँछ भने पाचनमा ध्यान दिनुस् । यो
कन्स्टिपेसन लगायतका ठूला समस्याको संकेत हुनसक्छ ।
कहिलेकाहीँ पादको गन्ध आउँदैन । त्यो खासमा सास लिँदा फोक्सो हुँदै पेटमा पुग्ने हावा हो । त्यही हावा पादमार्फत निस्कन्छ ।